Jobs Victoria Fund Somali | Jobs Victoria
Jobs Victoria Fund Somali
Daqligu wuxuu ka taageeri doonaa loo shaqeeyayaasha fursadaha shaqooyin abuura inay kobcaan oo ay soo kabsadaan iyadoo isla markaasna laga caawinayo dadka reer Fiktooriya ee shaqo doonka ah shaqooyin joogto ah.
Haddii aad tahay loo shaqeeye reer Fiktooriya ah oo aad diyaar u tahay inad shaqaaleysiisid shaqaale cusub, Jobs Victoria Fund ayaa kaa taageeri kara dhaqaale ahaan inaad shaqaalayso dadka ay saamaynta ugu badan ku yeelatay saamaynta dhaqaale ee cudurkan faafa.
Waa maxay Sanduuqa Shaqooyinka Victoria
Ilaa $20,000 oo ah mushahar kabista Jobs Victoria ayaa loo heli karaa milkiilayaasha dadka shaqaaleysiiya hadii ay shaqaaleysiiyaan shaqaale u qalma. Kabista mushaharka waxaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo kharashaadka ku baxaya qaadashada shaqaalaha cusub 12-ka bilood ee ugu horreysa shaqada.
Waxaad u dalbi kartaa kabidda mushaharka illaa in u dhiganta 20 shaqaale oo waqti buuxa (full time) shaqeeya waxayna ku kuxiran tahay baaxadda meheraddaada.
Ugu yaraan boqolkiiba 60 shaqooyinka ay taakuleeyaan sanduuqa Jobs Victoria waxay noqon doonaan haweenka, taas oo ka tarjumeysa saameynta weyn ee uu cudurkan faafa ku yeeshay fursadohooda shaqo.
Si aad ugu qalantid kabista waa inaad shaqaaleeysiisid ugu yaraan hal qof oo ka mid ah kooxaha mudnaanta hoos ku xusan. Kooxahan waa la taageerayaa sababta oo ah masiibada si gaar ah ayay u saameysay shaqadooda.
Sanduuqa Jobs Victoria waxay dhaqaale ahaan ku taageertaa shaqsiyaadkan shaqo-doonka ah ee mudnaanta koowaad u leh shaqo:
haweenka da'doodu ka weyn tahay 45 sano
Dadka shaqo doon ka ah ee mudo dheer shaqo la'aanta ahaa (shaqo la'aan lix bilood ama ka badan)
shaqo doonka ka diiwaangashan kuwa xiriirka la leh Jobs Victoria
Dadka Aborijiniska iyo / ama Torres Strait Islander ka ah
dadka magangalyo doonka / qaxootiga ah
soogalootiga dhowaan yimid ee ka yimid meelaha aanan asalkooda ku hadlin Ingiriisiga
dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 25 sano
dadka ka weyn 45 sano
dadka horay loogu shaqaaleeyay barnaamijka 'Working for Victoria'.
Haddii aad tahay milkiile wax shaqaaleeya oo daneynaya inaad ka dalbato Sanduuqa Shaqooyinya Fiktooriya (Jobs Victoria Fund), waa qasab inaad shaqaaleysiisaa kooxahan mudnaanta leh ka hor intaadan ka dalban Sanduuqa.
Haddii aad soo buuxiso dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka oo aad siiso macluumaadka lagama maarmaanka ah, waxaad heli doontaa maalgelin, iyadoo la fiirinayo xaaladaha iyo in lacag la heli karo.
Waxaad u dalbi kartaa kabidda mushaharka illaa in u dhiganta 20 shaqaale oo waqti buuxa (full time) shaqeeya. Haddii aad tahay milkiile wax shaqaaleysiiya oo aad awood u leedahay inaad tiro badan oo shaqooyin ah u abuurtid kooxaha mudnaanta leh fadlan la xiriir Jobs Victoria adoo u diraya Iimayl info@jobs.vic.gov.au.
Ganacsigeygu ma u qalmaa inuu ka dalbado Sanduuqa?
Si aad u ogaato inaad xaq u leedahay inaad ka dalban kartid Sanduuqa, fadlan wac khadka tooska ah ee Jobs Victoria.
Khadka tooska ah ee Jobs Victoria ayaa adeegsada Adeegga Tarjumaadda iyo Fasiraada Qaranka (TIS) – 131 450 – tarjumaadda iyo fasiraada in ka badan 150 luqadood.
Waxaad ama ka wici kartaa khadka tooska ah ee Jobs Victoria 1300 208 575 inta u dhaxeysa 9 am-5 pm, Isniinta ilaa Jimcaha waana kugu xiri doonnaa TIS, ama wac TIS 131 450 ayaga ayaana kuu wacayo khadka tooska ah. Turjubaannada TIS ama horay ayaa looga sii ballansan karaa khadka tooska ah, ama turjubaanka taleefanka degdegga ah TIS National waxaa laga heli karaa 131 450.
Wixii macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa halkan: www.tisnational.gov.au
Sidee ayaan u codsanaya?
Haddii aad u baahan tahay taageero dheeraad ah si aad u dalbato Sanduuqa, fadlan wac khadka tooska ah ee Jobs Victoria.
Khadka tooska ah ee Jobs Victoria ayaa adeegsada Adeegga Tarjumaadda iyo Fasiraada Qaranka (TIS) – 131 450 –tarjumaadda iyo fasiraada in ka badan 150 luqadood.
Waxaad ama ka wici kartaa khadka tooska ah ee Jobs Victoria 1300 208 575 inta udhaxeysa 9 am-5 pm, Isniinta ilaa Jimcaha waxaana lagugu xiri doonnaa TIS, ama wac TIS 131 450 ayaga ayaana kuu wacaya khadka tooska ah. Turjubaannada TIS ama horay ayaa looga sii ballansan karaa khadka tooska ah, ama turjubaanka taleefanka degdegga ah TIS National waxaa laga heli karaa 131 450.
Ku soo dir arjigaaga internetka adoo adeegsanaya badhanka Codsiga Hada ee hoose.
Taageero ayaa la heli karaa si ay kaaga caawiso inaad u hesho oo aad u qorto shaqaale xaq u leh kooxaha shaqo doonka ah ee mudnaanta leh. Haddii aad shaqaaleysiinaysid shaqaale, waxaad ka diiwaangelin kartaa meheraddaada Jobs Victoria . Waxaad kusoo dhajin kartaa shaqooyinka halkan oo waxaad kula xiriiri kartaa koox dad ah oo sii kordheysa diyaarna u ah inay adiga kuu shaqeeyaan. Adeeggan bilaashka ah ee sida sahlan loo adeegsado wuxuu ku siinayaa liis ay ku qoran yihiin musharixiinta maxalliga ah ee leh xirfadaha iyo waayo-aragnimada aad u baahan tahay - waxay kuu badbaadinaysaa waqti iyo lacag.
Haddii aad tahay milkiile shaqo abuura xiiseynayana abuurista shaqooyin tiro badan oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee mudnaanta leh fadlan la xiriir Jobs Victoria adigoo email u soo diraya .
Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir Jobs Victoria Hotline taleefanka 1300 208 575 inta u dhexeysa 9 am-5 pm, Isniinta ilaa Jimcaha.
Taageerada : jobs.vic.gov.au/findstaff